News - Macluumaad loogu talagalay H alxanka safka alxanka
Mabda'a shaqada ee mashiinka isku-dhafan ee H-beam iyo faa iidooyinka mashiinka isku-dhafan ee H-beam: mashiinka isku-dhafan ee H-beam wuxuu qaataa gudbinta hidda-socodka ee websaydhka iyo baalasha, iyo labada dhinac waxaa xuddun u ah isuduwaha farsamada. Waxay xaqiijin kartaa meelaynta ballacyo kala duwan iyo baalal baalal ah oo ka mid ah qaybaha la cayimay, xudun otomaatig ah oo sax ah, looma baahna in la isku hagaajiyo waqti kasta (iyadoo la adeegsanayo giraangir aan caadi aheyn oo loogu talagalay hagaajinta micro). Dhamaadka kooxda birta ah ee H-qaabeeya waxaa lagu qalabeeyaa hawo qaadis otomaatig ah oo si toos ah u qaada, taas oo hubin karta in dhamaadka jirku iyo saxanka baalku iswaafajiyeen inta kooxdu socoto. Saamiga cadaadiska sare waxaa haga bidix iyo midig afarta nooc ee biraha hagaha si loo xaqiijiyo xasilloonida inta lagu jiro riixitaanka. Tirada miisaska rullaluistemadka waa la dheereyn karaa lana yareyn karaa si macquul ah iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha iyo dhererka shaqada.
Nidaamka Haydarooliga wuxuu qaataa waxyaabaha caadiga ah ee habka Haydarooliga ee isku-xirnaanta Sino-shisheeye, waxaana lagu qalabeeyaa shaandho wanaagsan si loo hubiyo howlgalka lagu kalsoonaan karo ee muddada dheer ee soodhaweynta. Meeleynta websaydhka iyo baalasha garabka waxay qaadataa gudbinta haydarooliga, labada dhinacna waa la isku xidhayaa oo waxaa xuddun u ah iswaafajin farsamo, taas oo xaqiijin karta meelaynta ballacyo kala duwan iyo baalal baalasheed ah oo ku dhex yaal xaddiga la tilmaamay Xarunta dhexe ee otomaatiga ah waa sax oo uma baahna in wax laga beddelo markasta (iyadoo la adeegsanayo giraangiro yar yar oo yar yar). Dhamaadka kooxda birta ah ee H-qaabeeya waxaa lagu qalabeeyaa hawo qaadis otomaatig ah oo si toos ah u qaada, taas oo hubin karta in dhamaadka jirku iyo saxanka baalku iswaafajiyeen inta kooxdu socoto. Saamiga cadaadiska sare waxaa haga bidix iyo midig afarta nooc ee biraha hagaha si loo xaqiijiyo xasilloonida inta lagu jiro riixitaanka. Tirada miisaska rullaluistemadka waa la dheereyn karaa lana yareyn karaa si macquul ah iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha iyo dhererka shaqada. Nidaamka Haydarooliga wuxuu qaataa waxyaabaha caadiga ah ee habka Haydarooliga ee isku-xirnaanta Sino-shisheeye, waxaana lagu qalabeeyaa shaandho wanaagsan si loo hubiyo howlgalka lagu kalsoonaan karo ee muddada dheer ee soodhaweynta.
1.Habka wax soo saarka ee alxanka H-qaabeeya ee alxanka leh ayaa ah in birta H-qaabeeya loo dhigo qaab "I" ah, isla markaana alxanka laba geesood oo geesood ah labada dhinac isla waqtigaas, taas oo si weyn u kordhisa waxtarka alxanka. Sababtoo ah alxanka isku dhejisan, shabakadda asal ahaan kuma liidan alxanka ka dib.
2. Mashiinka toosinta birta ee qaabeeya H-qaabeeyaha qaabdhismeedka orthopedic wuxuu garwaaqsanayaa sixitaanka tooska ah ee qallooca xagal ee saxanka garabka birta ah ee H-qaabeeya ka dib markii alxamida dabada la mariyo rullaluistemadka riixaya eccentric, taas oo yareyneysa xoogga sixitaanka waxayna hagaajineysaa saxitaanka saxda.
3. Marka la eego qeexida alxamida, qeexida alxanka H-beams ayaa ugu weyn dalka Shiinaha, waxayna la mid yihiin khadka wax soo saarka alxanka H-beam ee shirkada H-beam alsoosaarka qalabka wax soo saarka (ESAB) ee ugu horumarsan dalka dibadiisa.
4. Qaabka isku imaatinka, habka isku dhafan ee iskuxirka-alxanka ayaa laqaatay, kaas oo yareynaya geedi socodka isla markaana hagaajinaya waxsoosaarka wax soo saarka.
5. Habka xudunta websaydhka iyo taarikada flange, laba koox oo ah qaababka xudunta hore iyo gadaal ayaa la qaatay si loo hagaajiyo saxnaanta meelaynta.
6. Cunugga siliggu wuxuu si tartiib ah ugu xiran yahay shumaca birta iyo xagalka alxanka ee qiiqa alxanka waa la sixi karaa.
7.Xadhig ballaaran oo alxam ah, iyadoo la adeegsanayo laba awood (DC + AC) silig laba-geesood ah, laba qaanso, habka alxanka barkadda dhalaashay. Astaamahan khadkan wax soo saar waa kuwa ugu horreeya Shiinaha.
8. Waxay qaadataa kantaroolka PLC ee la soo dhoofiyo, taas oo lagu kalsoonaan karo oo si fudud loo barnaamijayn karo.
9. Isla saldhigga, si joogto ah u dhammaystir dhammaan geeddi-socodka shirarka, alxamida, hagaajinta, qaadista, iyo sii deynta birta H-qaabeeya ee habka wax soo saarka.